Al-saadicuuna bil-xaq….. Waa ayo? Maxay aaminsanyihiin? Xageese inoo wadaan? - Halbeeg News
Al-saadicuuna bil-xaq….. Waa ayo? Maxay aaminsanyihiin? Xageese inoo wadaan?
Xilli hadda laga joogo sanad iyo xoogaa, waxaa magaalooyinka Qaahira iyo Muqdisho si isku mid ah looga dhawaaqay urur diimeed la magac baxay Al-saadicuuna bil-xaq oo micnaheedu yahay “Kuwii la jahrayay xaqqa”.
Ururukan oo ay xubno ka yihiin dad macalimiin ka ah jaamacadaha dalka, ganacsato, dhaqaatiir, Enjineerro iyo aqoonyahanno kale ayaa sheegay in ay isa soo banaan dhigeen kadib 40 sano oo ay wadeen wax ay ugu yeereen dacwad qarsoodi ah, tarbiyad iyo dhisid jiilkii islaamka.
Ujeedada ugu weyn ee ururka ayay kooxdani ku sheegeen in uu yahay ku soo celinta islaamka nolosha bulshoyinka kadib markii (Sida ay sheegeen) bulshooyinkaasi ka tageen Islaamka.
Intaas wixii ka danbeeyay kooxdu waxa ay si firfircoon ugu baahinaysay dacwadooda baraha bulshada iyaga oo soo bandhigayay inta badan muuqaallo tayadoodu aad u sarayso isla markaana ay ka soo muuqanayaan ragga ugu cadcad ururka.
Bilihii September iyo Oktober ee sanadkan ayaa sidoo kale kooxo dhalinyaro ah oo ka tirsan ururkani si xiriir ah uga soo muuqdeen braha bulshada iyaga oo iclamainaya in ay taageersanyihiin baaqa xarakada isla markaana ay dadka ugu wacayaan Islaamka.
Haddaba kooxdani waa ayo? Maxay aaminsanyihiin? Maxayse tahay natiijada ka dhalan doonta daacwadooda? Maxaase kaga aaddan culimada?
Kooxdani waa ayo?
Kooxdani sida ay iyaguba sheegeen waxa ay ka soo dhanbalmeen xarakaadkii Islaamiga ahaa ee 70-naadkii qarnigii hore ka hanaqaaday dalka Soomaaliya si ay nolosha bulshada uga dhigaan mid si buuxda u waafaqsan shareecada isla markaana is hortaag ku sameeyaan taliskii milateriga oo marar badan qaatay mawaaqif si daran uga hor imaanaya Islaamka.
Hase yeeshee kooxdani, sida muuqata waxa ay xarakaatka kale kaga duwanaayeen afar walxood oo kala ah:
1. In ay bulshada Soomalida, ka bulsho ahaan, ku xukumeen in ay yihiin gaalo maadaama qaybo kamid ah noloshooda lagu maamaulo wax aan ahayn shareecada Islaaamka.
2. In ay doorteen camalka qarsoodiga ah halkii ay dacwada la jahri lahaayeen.
3. Si aan loo ogaan caqiidadooda in aanay bulshada u muujin waxyaalaha qaar ee ka didin kara sida in ay meelaha qaar hilibka iska cunaan (Tan oo ah waxa ay kaga duwanyihiin takfiirka kale ee aan cunin hilibka ay gawraacaan dad aan iyaga ku caqiido ahayn) iyo in ay salaadda la dukadaan jamaacooyinka mararka qaar.
4. In ay si xeeldheer u darsaan una qaataan afkaartii Saydi Qudbi oo dad badani ku tilmaamaan in ay tahay fikradda salka u ah qaybo badan oo ka mid ah fikradaha takfiirka ee casrigan jira.
Maxay aaminsantahay kooxdani?
Waxyaalaha bud dhigag u ah caqiidada ay kooxdani aaminsantahay waxaa ka mid ah:
1. In ay bulshada Soomalida, ka bulsho ahaan ku xukumeen in ay yihiin gaalo maadaama qaybo kamid ah noloshooda lagu mamaulo wax aan ahayn shareecada islaaamka.
2. In ay aaminsanyihiin in dhamaan maamullada dawliga ah ee dalka ka jiraa (Federal iyo mid gobol) ay yihiin gaalo iyaga oo daliishanaya in qaarkoodna wax ku xukumayaan sharci aan ahayn kii Islaamka qaar kalana ay sharciyadaas dejinayaan (Xildhibaannada).
3. In xarakaadka Islaamiga ah ay weli u aqoonsanyihiin in yihiin Muslimiin maadaama waxa ay u istaageen ay tahay hirgelinta Shareecada Islaamka.
4. In bulshadu fardi-fardi ahaan aanay ku xukumayn gaalnimo iyo Islaamnimo midna ilaa ay la macaamilaan deedna ay labada qaanadood mid geliyaan.
Caqiidada noocan ah ayaa waxaa ka sii dhashay koox go’aanno iyo axkaam ah sida:
1. In ay aaminsanyihiin in aan salaadda jumcadu ku waajibin sidaas daraadeedna ay duhur iska dukan karaan maalmaha Jumcada maadaama sida ay aaminsanyihin aanay jirin ummad Muslim ah oo salaad jimco ah oogtaahi.
2. In aan jihaadku xilligan waajib ku ahayn iyaga maadaama ay ku jiran marxalladdii isdiyarinta. Taas waxaa tusaale kuugu ah in aanay ka qayb qaadan dagaalladii dalka looga xoreeyay Xabashida Itoobiya oo dad badan oo Soomaaliyeed u haysteen in uu ahaa jihaad muqaddas ah.
3. In aan marnaba la dejisan Karin wax qawaaniin ah xata haddii ay qawaaniintaasi nidaaminayaan qaybo ka mid ah nolosha oo aan quraanka, Sunnada iyo masaadirta kale ee tashriica Islaamku aanay si toos ah uga hadlin.
4. In ay ku jiraan xilligii qurbada oo la mid ah xilligii Islaamku soo ifbaxay sidaas daradeedna aanay waxyaalo badan oo manhiyaat u muuqda aanay ka joogsanayn sida laaluush ay siiyaan dadka suldada jooga iwm.
5. Ku sii talaxtagga axkaamta gaalaysiinta ee dadka lagu ridayo iyada oo aad marar badan maqlayso “Hebel waa gaal” iyada oo sababtu tahay wax uun macsi ah oo uu sameeyay sida isaga oo khamri cabay IWM.
Maxayse tahay natiijada ka dhalan doonta daacwadooda?
Nimankani waxa ay leeyihiin dhinacyo fiican oo natiijooyin wanaagsan ku reebi doona bulshada, kuwaas oo aan qormooyinka soo socda kaga hadli doonno, hase yeeshee maantay aan qalinka ku godo natiijooyinka khatarta ah ee bulshada ka soo waajihi doona kooxdan.
Kooxdu waxa ay hadda ka shaqaynayaan in ay dhalinyaro badan ku tarbiyeeyaan caqiidadooda, taas oo sii baahinaysa afkaartooda, kadiban labo waddo – oo mid kasta dhiig ku daadan doono- midkood ayay raaci doonaan:
1. In ay isku dayaan in ay awoodda xukunka ee dalka qabsadaan haddii ay xaddi mucayan ah gaaraan tiro ahaan iyo tayo ahaan iyaga oo kolkaasna dagaal foodda gelin doona ciddii isku dayda in ay awoodda xukunka ka hor istaagto.
2. In dawladdu ka hortagto oo la dagaasho fikirkooda deedna ay hubka qaataan oo ay sida Al-shabaab dagaal iyo dhiig-bax aan dhamaan ummadda u horseedaan.
Khatarta ugu weyn ee kooxdan ayaa kuu muuqanaysa marka aad fahamto in ay ka xag jirsanyihiin Al-shabab waayo Shabaabku bulshada Soomaaliyeed, marka laga reebo dawladda iyo dadka u shaqeeya uma haystaan gaalo laakiin nimankani ummadda oo dhan gaalo ayay u haystaan inkasta oo ay ku doodayaan in aanay kuxun ku ridayn afraadda bulshada ilaa ay la macaamilaan.
Bal adiguba sawiro nin gaal kuu yaqaan, in gaalka la dilana aaminsan maxaa ka xiga in uu ku dilo? Waa keliya inta uu go’aanka dilkaaga qaadanayo isla markaana hub qaadanayo. Sow sidaas maahan?
Maxaa kaga aaddan culimada kooxdan?
Waxaad mooddaa in xilligii kooxdani is iclaamisay lagu soo beegay xilli ay saaxadu faaruq u tahay oo dhamman xarakaadkii Islaamiga ahaa qaarkoodna iska tabar yareeyeen, qaar kalana dagaallo faraha la galeen.
Tani waxay u saamaxday in kooxdan oo fiikradahooda ku baahisa baraha bulshada aanay jirin cid bulshada yac ka leh ama fikirkooda fikir dhinac dhigaysa marka laga reebo Sheikh halkaas ka qaylyay iyo mid xaggaas bayaan ka soo saaray.
Culimada waxaa la gudboon in nimankan dood cilmiyeed lala galo iyada oo aan wax cadaadis ah la saarin, isla markaana fikirkooda iyo fiqhigooda la ag dhigo mid kale.
Haddii aan sidaas la yeelin, dad badani iyaga ayay u arki doonaa doorashada keliya ee jirta deedna iyaga unbaa la raaci doonaa.
Taliyiha ciidanka booliska Puntland oo is casilay
Guddoomiyaha maxkamadda sare oo tababar u furay garsoorayaal